𝐖𝐡𝐲 𝐒𝐃-𝐖𝐀𝐍 𝐢𝐬 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – NEX4 Blog
Why Sd WAN is critical for digital transformation
➡ Traditional WAN Network Problem
ယနေ့ခေတ် Organization တော်တော်များများဟာ DC ထဲမှာ On-premise Deploy လုပ်ထားတဲ့ Services တွေအပြင် Cloud Services (E.g SaaS, IaaS) တွေပါ အသုံးများလာကြပါတယ်။
DC နဲ့ Cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့ Services တွေကို သုံးတဲ့ User တွေကလဲ တစ်နေရာထဲမှာ ရှိမနေဘဲ နေရာပေါင်းစုံ (Branches, Remote Location) တွေကနေ Access လှမ်းလုပ်လာကြပါတယ်။ နည်းပညာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာတာ နဲ့ အမျှ ကျွန်တော်တို့တွေသုံးနေတဲ့ Services တွေကလဲပိုများလာပါတယ်။ Service များလာလေ access လှမ်းလုပ်ဖို့အတွက် Bandwidth တွေ ပိုလိုအပ်လာလေဖြစ်လာပါတယ်။ Branch တွေမှာ ရှိတဲ့ user တွေဟာ Cloud or HQ Datacenter ထဲမှာရှိတဲ့ Bandwidth များများလိုအပ်တဲ့ application တွေ, video streaming တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲ Local Network တစ်ခုအတွင်းမှာ အသုံးပြုနေသကဲ့သို့ ထစ်ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာကြပါတယ်။ User တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဖို့အတွက် WAN-Link Bandwidth တွေထပ်တိုးတာတွေ၊ Critical App တွေကို SLA ရှိတဲ့ Link တွေပေါ်ကနေတင်ပေးရတာတွေ၊ QOS တွေ သတ်မှတ်ရတာတွေ၊ Security ကောင်းအောင် လိုအပ်တဲ့ Configuration ချပေးရတာတွေ စသဖြင့် လိုက်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
Traditional Network တွေမှာ ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေအကုန်လုံးကို Manual Configuration လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Visibility မရှိတဲ့ အတွက် Application တွေရဲ့ performance တွေကိုမမြင်ရတဲ့အတွက် ထိန်းချုပ်ရတာလဲ ခက်ခဲပါတယ်။ Branch တစ်ခုချင်းဆီမှာ သေချာတတ်ကျွမ်းတဲ့ IT Admin တွေကို ထားဖို့ဆိုတာလဲ ကုန်ကျမယ့် Cost နဲ့ ပြန်ရမယ့် Benefit က မမျှတလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် Organization တော်တော်များများမှာ HQ မှာဘဲ Skill Full ဖြစ်တဲ့ IT Admin တွေကို ခန့် ထားပြီး ရှိသမျှ HQ ၊ Branches တွေရဲ့ Routers တွေကို remote နဲ့သော်လည်းကောင်း, လိုအပ်လျှင် On-Site သော်လည်းကောင်း သွားပြီး Manage လုပ်ကြရပါတယ်။ Branch Sites တွေ နည်းနေတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ သိပ်မရှိပေမယ့် Branch Site တွေအရမ်းများလာတဲ့ အခါမှာ Network ဟာ ရှုပ်ထွေးလာပြီး Manual Manage လိုက်လုပ်ရမယ့် Device အရေအတွက်နဲ့ IT Admin ဦးရေဟာ မမျှတလာတော့ဘဲ Manage လုပ်ရာမှာ တော်တော်ကို ခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Organization တော်တော်များများဟာ SD-WAN Solution ကို သုံးလာကြပါတယ်။
SD-WAN Technology ဟာ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ နဲ့ အရမ်းကြီး စိမ်းနေတဲ့ Technology အသစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Traditional Network မှာ Manual လုပ်နေရတဲ့ Policy Base Routing တွေ၊ WAN Optimizing တွေ၊ WAN-LINK Load Balancing တွေ၊ WAN-LINK Monitoring တွေ၊ Secure Tunnel တွေ စတဲ့ Feature တွေကို Automatic ဒါမှမဟုတ် ကြိုတင်ပြီး Define လုပ်ပေးထားတဲ့ Template တွေကို အသုံးပြုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူကိုယ့် လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် Deploy လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
SD-WAN Technology မှာ အခြေခံအားဖြင့် Control Plane, Management Plane နဲ့ Data Plane တွေကို သီးခြားစီခွဲထားကြပါတယ်။ Control Plane, Management Plane တွေဟာ Controller ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ SD-WAN Solution Vendor တော်တော်များဟာ သူတို့ ရဲ့ Controller တွေကို Cloud ပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် On-premise ဖြစ်ဖြစ် deploy လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားကြပါတယ်။ Centralize Controller ကနေပြီးတော့ ရှိသမျှ WAN Device Profile တွေ, Policy တွေ Configuration တွေကို Manage လုပ်ပါတယ်။ Data Plane ကတော့ HQ, Branch တွေမှာ ရှိတဲ့ WAN-Edge Device တွေမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ WAN-Edge Device တွေဟာ Physical and Virtual Appliance ဆိုပြီး ၂မျိုးထုတ်ကြပါတယ်။ SD-WAN Solution ကို Provide လုပ်ပေးတဲ့ Vendor (E.g Cisco Viptela, Meraki, VMware Velocloud and etc.) တော်တော်များများရှိပါတယ်။
SD-WAN Solution တစ်ခုမှာ အနည်းဆုံး ရှိရမယ့် Core Feature တွေရှိပါတယ်။ Vendor တော်တော်များများဟာ အောက်ပါ Feature တွေ ကို Support ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
1️⃣ Centralize Monitoring and Management
2️⃣ Application Aware Routing and Policy (QOS)
3️⃣ Rich Analytics (Application Performance, Tunnel Performance, Network Availability, Site Availability and etc.)
4️⃣ Transport Independent (Internet, MPLS and 4G LTE)
5️⃣ VPN and Tunnel Encryption
7️⃣ Dynamic Path Selection (Load sharing across WAN connection, Remediate connection base on threshold)
8️⃣ Zero Touch Deployment (As easy to setup as home wifi)
SD-WAN Vendor တွေကနေ support လုပ်တဲ့ feature တွေတော်တော် များများဟာ သိပ်မကွာပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် Technology တွေကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် မတူညီတဲ့ Vendor တွေအချင်းချင်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု integrate လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါ။
➡ Benefits of SD-WAN
WAN Link တွေ Bandwidth တွေကို ထပ်တိုးတာဖြစ်ဖြစ် ပြန်လျော့ ချင်တာဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Zero-Touch Deployment ဖြစ်တာကြောင့် Edge Device တွေကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဖြင့် Deploy လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Centralize management ဖြစ်တာကြောင့် Operation Cost ကို သက်သာစေပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ WAN-Link အကုန်လုံးကို Load Balance လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း Idle ဖြစ်နေတဲ့ Backup Link တွေသီးသန့် ထားစရာမလိုတော့ဘဲ Backup Link အတွက်ကုန်ကျရမယ့် စရိတ်ကို သက်သာစေတဲ့အပြင် လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Link/Bandwidth တွေကို Optimize ဖြစ်စေပါတယ်။
Site တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ Data တွေကို ပို့ရင် WAN Traffic တွေကို Encrypt လုပ်ပြီးမှပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ Vendor ပေါ်မူတည်ပြီး Build-In Firewall (Basic, App-Level, UTM) Feature တွေပါရှိပါတယ်။ Third Party Security Company တွေနဲ့ Integrate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ ISP တွေကနေ ဈေးသက်သာတဲ့ Multiple Internet Link တွေကို Load Balance လုပ်ပြီး အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဈေးကြီးပြီး Reliable (SLA) ရှိတဲ့ MPLS Link များနေရာတွင် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ISP တစ်ခု Down သွားခဲ့ရင်တောင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ISP မှ Internet Link တွေကနေ WAN-Link Load Balance လုပ်ပြီး ဆက်လက် အသုံးပြုနိင်တဲ့အတွက် Link Failure အတွက် 99.99% Reliable ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကြီးပြီး Bandwidth အနည်းငယ်သာရရှိတဲ့ MPLS Link တွေအစား ဈေးသက်သာပြီး Bandwidth များများရရှိတဲ့ Internet Link များကို Load Balance လုပ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် ယခင် Traditional WAN Throughput ထက် Performance ပိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။ Application Aware ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ Application များကို QOS သတ်မှတ်ပေးခြင်း, သတ်မှတ်ထားတဲ့ Threshold (Delay, Jitter) တွေပေါ်မူတည်ပြီး Downtime မရှိဘဲ Dynamic Path Switching ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ SD-WAN ရဲ့ Benefit များနှင့် ရရှိနိုင်တဲ့ Feature များဟာ လက်ရှိ Organization တွေရဲ့ Business လိုအပ်များကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိင်တဲ့ အတွက် Digital Transformation မှာ SD-WAN Technology ဟာ အရေးပါပြီး အသုံးများလာမယ့် Technology Trend တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလို့ လာပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရင်း နိဂုံးချုပ် လိုက်ပါတယ်။
✍✍✍ AUTHOR : PHYO WAI AUNG